Xog: Cumar C/rashiid oo wareejinaya Xubinimadda Aqalka Sare, Maxay tahay Sababtu..? – Hornafrik Media Network
Xog ay heshay Hornafrik ayaa sheegaysa in Cumar C/rashiid uu Qoraalkiisa u diray Guddoonka Aqalka Sare, isagoo doonaya inuu Xubinimadiisa Aqalka Sare ku wareejiyo Qof uu isagu wato. Waxayna Guddoonka Baarlamaanka ka arrinsanayaan sidii ay ka yeeli lahaayeen Codsigan oo haddii ay aqbalaan ay dhici karto in Wadada uu u xaaro sidii Baarlamaanka 9-aad in la isku baneeyo Kuraasta Xildhibaanimo.
Cumar ayaa loo sababaynayaa inuu uga tanaasulanayo Xubinimadda Aqalka Sare isaga oo aan ka qayb galli karin Fadhiyadda Aqalka Sare, sababo la xiriira Cabsi Amni. Waxayna Hornafrik ogaatay in Cumar C/rashiid la soo gaarsiiyay Digniino Qataro soo wajihi karo haddii uu tago Muqdisho.
Gen Jaamac Qaalib oo iska casilay Gudoomiyanimadda Guddiga Taakulaynta Ciidanka.